Ụbọchị My Pet » Mesie Gị Online dịwara Profaịlụ Photo
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-ahọrọ foto na-akpakọrịta na gị online profaịlụ adịghị mkpa n'ezie, eche ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na profaịlụ foto bụ otu n'ime isi ihe na-ekpebi ma onye online dater ga-enye profaịlụ gị a abụọ anya. Ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere bụghị akpakọrịta a foto na profaịlụ gị, adịghị atụ anya na ka ọ bụla Ibọrọ. Many online daters specify their searches through online dating profiles to only show the results of people with photos. The online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ foto bụ a dị oké mkpa akụrụngwa ịchọpụta ịga nke ọma gị n'ụwa nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Gị gootu mmeghachi omume nwere ike ịbụ itinye ndị kasị mma foto i nwere nke onwe gị mgbe ị na-ahọrọ foto gị na gị na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ. Ọ bụ ihe kwere nghọta na ị ga-achọ ime ka onwe gị anya dị ka mara mma dị ka o kwere online mgbe niile, ị na-achọ a ụbọchị nri? Ọfọn, o nwere ike ịbụ mma echiche iji bulie a profaịlụ na bụ ntakịrị ihe nnọchiteanya nke otú ị n'ezie anya, bụghị otú ị chọrọ ị na-ele anya.
Dị ka e kwuru n'elu, profaịlụ foto bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi na kwenye a nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-agakwuru ọzọ dị ka a nwere egwuregwu online. Ọ bụrụ na ị na-etinye elu a foto na-adịghị n'ụzọ ziri ezi na-anọchi anya otú ị n'ezie anya (foto gị bụ ọtụtụ afọ, i nweela 20 lbs ebe foto gị na e weere, ma ọ bụ foto gị na e gbanwere ka ị na-ele ndị ọzọ mara mma) gị ụbọchị ga-apụghị izere ezere ga-esi na-ezighị ezi nke otú i si ele. Ị na-agba ọsọ a elu n'ihe ize ndụ nke na-akụda gị ụbọchị na-emepe emepe ntụkwasị obi mbipụta nri kwụsịrị ụsụ mgbe ị na-ezute mmadụ na anya nnọọ a bit dị iche iche karịa ọ-atụ anya.
N'otu oge ahụ, jide n'aka gị foto bụ ma ezi uche dị na ire ụtọ. Ọ bụ ezie na ị na-achọghị inye onye na-abụghị eziokwu echiche banyere otú ị n'ezie anya, na-echeta, na ị ka na-agbalị iji nweta a ụbọchị. Unu biputere a na foto dị gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ nke oge mgbe ị bụ ọnwa anọ igabiga maka a ịkpụ ntutu ma ọ bụ na n'ụbọchị ị chefuru na-etinye na anam-elu. Jụọ a enyi ma ọ bụ abụọ nke foto nke ị na-esi mee ka gị mma àgwà mgbe ọ ka na-enye a ezi uche echiche nke ihe ị na-ele anya dị ka on a ụbọchị ọma.
Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ itinye otutu foto nke onwe gị, na-eme otú. For your main profile photos, it is probably best to get a nice head and shoulder shot so that your profile browsers can get a good sense of what you look like. Ma, -uru nke otutu foto nhọrọ site na iji ya dị ka ohere iji gosi ụfọdụ n'ime gị ọzọ pụrụ iche atụmatụ na àgwà. Họrọ foto na-egosi na ị na-enwe fun, na-ekere òkè n'èzí omume, ma ọ bụ ese na mara mma eke ntọala.
Agbakwunyere Online dịwara Profaịlụ Photo Atụmatụ
– Jide n'aka na ị na-amụmụ ọnụ ọchị foto gị. Na ị chọrọ inye a nwere egwuregwu echiche na ị bụ onye obi ụtọ njikere ịmalite a obi ụtọ ma na-enwe mmekọrịta.
– Unu biputere foto na-ekpughe onye ọmụma banyere ọrụ gị ma ọ bụ ndụ ogologo. Ọ bụrụ na ị biputere a foto nke ị na-guzo n'ihu ụlọ gị adreesị egosi a ihe ịrịba ama gị ụlọ ọrụ ụlọ, ị nwere ike na-ekpughe ihe ọmụma na-online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị so karịa ị chọrọ. Nọgidenụ na-foto dị ka amaonye dị ka o kwere.
– Buru n'uche ihe ị chọrọ na-egosi na ndị ọzọ mgbe ị na-ahọrọ foto gị. Unu etinye foto nke ị na-aṅụ ma ọ bụ mmanya na-egbu, na-egbu maramara igwefoto, ma ọ bụ flipping nnụnụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ oké ihe banye ná mmekọrịta ịhụnanya.